ब्रसेल्समा सस्ता कस्ता खाने?
बेल्जियमको राजधानी धेरै आयरिश पबहरूमा विभिन्न व्यभिचारीहरूसँग यात्रीहरूको स्वागत गर्छन्, र ब्रसेल्समा रेस्टुरेन्ट र क्याफेहरूको छनौट मात्र प्रभावशाली छ। 2500 भन्दा धेरै उत्कृष्ट ठाउँहरू स्न्याक, एक कफी, एक डिनर र बेशक, रोमांटिक डिनर प्रदान गर्दछ। खानपान प्रतिष्ठानमा मूल्यहरू पनि एकदमै फरक छन्: शहरको केन्द्रीय भागको सञ्जाल संस्थाहरूमा तपाईं 20-30 यूरोको लागि खाईरहनु भएको छ, वा बचत गर्न, पिज़्जेरियामा र एक चीनी रेस्टुरेन्टमा 8-14 यूरोको लागि नाश्ता गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए ब्रसेल्समा कहाँ र सस्तो छ?
बजेट पर्यटकहरूको लागि सार्वजनिक खानपान
ती व्यक्तिहरूका लागि जो आफ्नै आफ्नै खाना बनाउन चाहँदैनन्, तर स्थानीय व्यंजनहरूको आनन्द लिन चाहन्छन्, सस्तो तर आरामदायक कैफेहरू र बारहरू खुला छन्।
यो राम्रो छ र सस्ता कोसोमस कैफे मा ठाउँ जेन्डदान 35 मा स्थित छ। यो क्याफे ग्रीक भोजन र एक उत्कृष्ट शराब तहखाने द्वारा पर्यटकहरुको लागि प्रसिद्ध छ। लंचमा, तपाइँ लाइभ म्याचहरू, स्की दौडहरू र बक्सिङ युद्धहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। ग्रीक परिवारले क्याफेको स्वामित्व लिने, तपाईंलाई साँच्चै दक्षिणी स्वागत प्रदान गर्दछ।
नोर्ड्जी मेर डु नर्ड उनका लागि भेट्न लायक छ जसले शहरमा सस्तो कैफे खोज्दैछ। यो शहरको बीचमा अवस्थित छ। एक सडक क्याफे उत्तम उत्तम र सहायक वेटरहरूको घमन्ड गर्न सक्दैन, तर यो ठाउँ हो जहाँ ब्रुसेल्समा समुद्री खाना खाउन सक्छ: सूप समुद्री सागरबाट बनाइन्छ, लसुन सस र ग्रील्ड टमाटर सूपको साथ ग्रिल गरिएका चिन्राहरू। क्याफे को एक विशेषता बैठक को कमी छ, त्यहाँ एक खडा छ।
अर्को बजेट स्थान Belga कैफे हो, यो संस्था प्लेस Eugène Flagey मा स्थित छ। यो क्याफे तपाईं बेल्जियम डिशहरु को एक विस्तृत श्रृंखला संग प्रसन्न हुनेछ, र मूल्य र गुण आनन्दित हुनेछ। नाश्ता, लंच र कफी यहाँ माग गर्दै छन्। तिनीहरू धेरै स्वादिष्ट खाना बनाउँछन्, र अर्डर चाँडै सेवा भइरहेको छ, यही कारण त्यहाँ धेरै मानिसहरू छन्। त्यहाँ खुला-वायु तालिकाहरू छन्, जुन पनि खाली छैनन्। यो बेलगा कैफेमा 5-8 यूरो को लागी एक राम्रो नाश्ता वा लंच हुन सम्भव छ।
फास्ट फूड रेस्टुरेन्ट हेक्टर चिकन ब्रसेल्स मा एक स्थान हो जहाँ तपाईं आकर्षक मूल्य मा एक चिकन व्यंजन खा सकते हो। Place de Brouckere मा फास्ट फूड छ। क्रिसमस चिकनको ठूलो भाग र शराब र बियर समेत पेय पदार्थको ठूलो चयन, यो स्थान स्थानीय र पर्यटकहरु संग लोकप्रिय बनाइयो। यहाँ उत्कृष्ट खाना खाने 7-8 यूरो र अझ कम हुन सक्छ।
ब्रसेल्समा क्याफेहरू र रेस्टुरेन्टहरूको छनौट ठूलो छ। त्यसैले तपाईं एक ठाउँ पत्ता लगाउन निश्चित हुनुहुन्छ जहाँ तपाईं स्वादिष्ट र सस्तो स्वाद गर्न सक्नुहुनेछ। राम्रो आराम छ!
ब्रसेल्स मा होटल
ब्रुग मा होटल
Ostend, बेल्जियम - आकर्षण
लीज, बेल्जियम - होटल
एन्टवर्प - हवाई अड्डा
1 दिनको लागि घन्टमा के देख्नुहुन्छ?
लेग - हवाई अड्डा
घन्टिन, बेल्जियममा खरीदारी
आईसीएफ पछि एचसीजी
Sienna मिलर ब्रैड पिट को बहाना छैन
ड्रग्स जुन रगतमा कम कोलेस्ट्रॉल
बच्चाहरु Adriano Celentano
जाम - नुस्खासँग पाइईको लागि सर्टकट
गाजरका साथ पटाई
आईहियर रेडियो संगीत पुरस्कारहरूमा गीगी हदीदले6वटा संगठन परिवर्तन गरेका छन्
कुकुरबाट कुकुरको सुरक्षा कसरी गर्ने?
साइन-दाँया टकमा ठोकर
Thrombophlebitis संग आहार
घोटाला र निशानबाट क्रीम
महिलाहरु को फैशन - शरद ऋतु - सर्द 2015-2016
ब्रेकमा घरको बनाइएको उकालो पोर्क
लिना हडीले सम्पादनको लागि एक फ्रान्सेली साक्षात्कार दिए
फ्लो उच्च तल्लो